Sawirro cusub oo Mi5 ah ayaa na tusaya dhinacyadiisa | Androidsis
My (Xiaomi) waa soo saare u keenaya guux aan caadi ahayn warshadaha. Tallaabooyin aamusnaan leh ayay culeys ku sii kordhaysay qayb hore ay u talin jireen laba soosaarayaal: Samsung iyo Apple. Miisaan aad u badan ayaa soo kordhayama inay ku guuleysatay inay kala soo baxdo shirkadda weyn ee Kuuriya Shiinaha, halkaas oo uu gacan bir ah ku qabtay suuqa taleefannada.
Waxaan rajeyneynaa imaatinka calanka xiga ee soo saaraha Aasiya, taas waxaa laga arki karaa CES 2015. Waxaan horay u aragnay sawirro, iyo xitaa faa'iidooyinka suurtagalka ah, laakiin illaa iyo hadda ma aanan ogeyn sida ay u weynaan laheyd. Hadda oo ay leeyihiin xaday sawiro cusub oo Mi5 ah waxaa jira wax yar oo qarsoodi ah oo daaha laga qaadayo.
Muraayado khafiif ah iyo geesaha khafiifka ah ee Xiaomi Mi5
Markaad fiiriso sawirrada la sifeeyay waxaan arki karnaa in Mi5 uu xoogaa yeelan doono looxyada hore runtii caato ah. Iyada oo leh hay'ad unibody ah iyo naqshaddaas qiimaha leh ee dadweynuhu aad u jecel yihiin, qalabka cusub ee Mi (Xiaomi) ayaa hubaal mar labaad guuleysan doona.
Xusuusnow in astaanta soo socota ee soo saaraha Aasiya laga filayo inay eegaan a 5.7 inch screen oo leh xal 2560 x 1440 pixels (QHD), marka lagu daro haysashada sideed-core Qualcomm Snapdragon 810 processor, afar Cortex A57 oo leh xawaare saacad ah 1.96 GHz iyo afar kale Cortex A53 kale waxay gaari doonaan xawaare saacad ah 1.56 GHz awoodda.
Waxaas oo dhan waa inaan ku darno Adreno 430 GPU, mid ka mid ah kuwa ugu fiican xagga farsamaynta shaxanka. Ugu dambeyntii 240 megapixel Sony Exmor IMX20.7 shidma wuxuu ballan qaadayaa in Xiaomi Mi5 ay ku soo qaadaneyso sawirro tayo la yaab leh.
Qiimaheeda? Waa mid ka mid ah waxyaalaha qarsoodiga ah, in kasta oo la tixgelinayo sida soo-saaruhu u shaqeeyo, haddana waxay u badan tahay in Shiinaha ay uga bixi doonto suuqa qiimo qiyaas ah 250 euros. Dabcan, Isbaanishku waxay iska iloobaan helitaanka cutub qiimahaas ah. Ikhtiyaarka kaliya ayaa ah iyada oo loo marayo qeybiyeyaasha iyo khidmadaha iyo kuwa kale, waxay ku dhammaan doontaa qiime dhan 400 euro. In kasta oo ay weli tahay qiimo runtii soo jiidasho leh.
Su'aasha kaliya ee soo baxdaa waxay ku saabsan tahay processor-ka. Haa ugu dambeyntii Mi5 waxaa lagu soo bandhigaa CES ee Las Vegas Iyo, markaan arkey dhibaatada ay Qualcomm ku hayso Snapdragon 810, waxaan doorbidayaa inay ugu dambeyn adeegsato isla processor-ka sida Samsung Galaxy Note 4, Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 quad-core at 2.7 GHz.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Sawirro cusub oo Mi5 ah ayaa na tusaya dhinacyadiisa
Waa maxay saxafiyiinta dijitaalka ah ...
Memory Map-ka wuxuu muujiyaa booska bilaashka ah ee la isticmaalay ee xusuusta gudaha ama SD-ka taleefankaaga Android